Kubvumirana neHyperbaric Services - Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT
musha/Hyperbaric Services/Kubvumirana neHyperbaric Services - Hyperbaric Oxygen Therapy HBOT
Kubvumirana neHyperbaric Services - Hyperbaric Oxygen Therapy HBOTtekna_mod2018-01-02T13:51:59+00:00
Vaya vari Bhizimisi re Hyperbaric Therapy Seminar
Point of Connection Kuratidza nzvimbo yekuvakwa yakarongwa
"Bhizimisi reHyperbaric Therapy" Seminar kune avo vanofunga kuzarura chipatara kana kuti nzvimbo yeHBOT inosununguka. Iyi seminhara inowanzotungamirirwa pamusoro pevhiki yekupedzisira pedyo neTampa Florida. Vatori vechikamu vanouya nepepanhau rePA & Lateral chefomu rekupedzisira vangave nehuwandu hwehuwandu hwehutachiona muChikoro A neChikamu B HBOT Systems. Kana iwe une 5 kana vanhu vakawanda tichaunza seminari panzvimbo yako.
POCD (Point of Connection Drawings) kana iwe ukatipa nemifananidzo yakagadziriswa yewebsite yako yekuvakwa yakarongwa tichakupa POCD kuratidza izvo zvinodiwa kuti uite neNFPA 99-2015 National Fire Codes uye Med-Gas Plumbing.
Sokutaura ku TEKNA Consulting Services isu tichakupai nhamba dzevanhu vanobatanidzwa nechinhu chakasarudzika pamusika wako.
Zvemabhizimisi Ongororo neMoto Marshall inoshanda kubvisa matambudziko nekusarudza nzvimbo panzvimbo yeHBOT.
Site Suitability Surveys simbisa kuti nzvimbo inoenderana neHBOT uye inoshandiswa nesu FDA Maitiro Akanaka Okugadzira Manufacturing Manual.
Nhamba Yakanakisisa Pamvura Inokonzerwa neOxygen isu takabatsira vakawanda vevatengi vedu kuwana mvumo yekukwikwidza zvikuru pamvura yehutano yegorosi oxygen.
"In-Inodzidziswa Basa" inosanganiswa pasina mari nezvose zvatinoshandisa. Zvitatimiti zvinobudiswa kune vese vashandi vako vanoenda kunodzidza dzidzo. Zvitatimiti hazvina kupiwa kune avo vanopinda muchikoro.
Takafarirwa zvikuru nehutano, kushanda, nekuvimbika kweMuenzaniso wedu 6000 Multiplace Chambers.